Ebe nke atọ na-eme nnyocha nwere ike ọgụ na mgba bụ nzuzo. Dị ka Lowrance (2012) na-etinye ya nnọọ ná nkenke: "nzuzo a ga-akwanyere ùgwù n'ihi na ndị mmadụ ga-akwanyere ùgwù." Nzuzo Otú ọ dị, notoriously imetosi echiche (Nissenbaum 2010, Ch. 4) , na dị ka ndị dị otú ahụ, ọ bụ ike iji mgbe na-agbalị -eme ka kpọmkwem mkpebi banyere nnyocha.
A nkịtị ụzọ na-eche banyere nzuzo bụ na a ọha / onwe dichotomy. Site na nke a ụzọ iche echiche, ma ọ bụrụ na ozi dị n'ihu ọha inweta, mgbe ahụ, ọ ga-eji site na-eme nnyocha na-enweghị nchegbu banyere emebi ndị mmadụ nzuzo. Ma nke a pụrụ na-agba n'ime nsogbu. Dị ka ihe atụ, na November 2007 Costas Panagopoulos zigara onye ọ bụla na atọ na obodo nta a leta banyere ihe na-abịa na ntuli aka. Na obodo abua na obodo-Monticello, Iowa na Holland, Michigan-Panagopoulos kwere nkwa / egwu na-ebipụta ndepụta nke ndị na-ama tozuru oke na akwụkwọ akụkọ. Na ndị ọzọ na obodo-Ely, Iowa-Panagopoulos kwere nkwa / egwu na-ebipụta ndepụta nke ndị na-ama tozuru oke na akwụkwọ akụkọ. Ndị a agwọ ọrịa E kere eji nganga na ihere (Panagopoulos 2010) n'ihi na ndị a mmetụta uche nke a hụrụ na mmetụta turnout na mbụ ọmụmụ (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Ozi banyere onye votes na onye na-adịghị bụ ọha na eze na United States; onye ọ bụla nwere ike ịnweta ya. Ya mere, onye pụrụ ịrụ ụka na n'ihi na nke a ịtụ vootu ọmụma ama ọha na eze, na ha enweghị nsogbu na-eme nchọpụta na-ekwusara ya na akwụkwọ akụkọ. N'aka nke ọzọ, ihe banyere na esemokwu na-adị njọ ọtụtụ ndị.
Dị ka ihe atụ a na-egosi, ọha na eze / onwe dichotomy bụ oke masịrị (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) . A mma ụzọ na-eche banyere nzuzo, onye e mere karịsịa aka okwu akpọlite ​​ndị digital afọ, bụ echiche nke Contextual ike n'ezi (Nissenbaum 2010) . Kama atụle ọmụma ọha ma ọ bụ onwe, Contextual ike n'ezi ihe na-elekwasị anya aga nke ọmụma. Dị ka ihe atụ, ọtụtụ ndị ga-abụ unbothered ma ọ bụrụ na dọkịta ha na-akọrọ ahụ ike ha ndia na dọkịta ọzọ mana ga-enweghị obi ụtọ ma ọ bụrụ na dọkịta ha rere a otu ozi ka a ahịa ụlọ ọrụ. N'ihi ya, dị ka Nissenbaum (2010) , "a nri gị na nzuzo bụ ma a ikike nzuzo ma ọ bụ a nri ịchịkwa ma a ikike kwesịrị ekwesị eruba nke onye ozi."
The isi echiche bụ isi kpatara esemokwu Contextual ike n'ezi ihe bụ onodu-ikwu informational norms (Nissenbaum 2010) . Ndị a bụ norms nke na-achịkwa aga nke ọmụma na kpọmkwem ntọala, ha na-ekpebisi ike site atọ parameters:
N'ihi ya, mgbe ị dị ka a na-eme nchọpụta na-ekpebi ma ha na-eji data na-enweghị ikike ọ bụ na-enye aka ịjụ, "Ndi emi eji emerụ onodu-ikwu informational norms?" Laghachi n'ihe banyere Panagopoulos (2010) , na nke a, ka onye nwere n'èzí -eme nchọpụta na-ebipụta anatara nke Ntuli ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị Ntuli aka na akwụkwọ akụkọ yiri yiri ka emerụ informational norms. N'ezie, Panagopoulos emeghị otú ahụ o kwere ná nkwa / iyi egwu n'ihi na mpaghara ntuli aka isi ná nne agụ akwụkwọ ozi ya we neme ya na ọ bụghị ezi echiche (Issenberg 2012, 307) .
N'ebe ndị ọzọ, Otú ọ dị, na-eche banyere onodu-ikwu informational norms na-achọ a bit ọzọ echiche. Dị ka ihe atụ, ka anyị laghachi na o na-eji ekwentị mkpanaaka oku na ndekọ soro agagharị n'oge Ebola akasiaha ke West Africa ke 2014, a ikpe na m atụle n'isiokwu na-iwebata ka isiakwụkwọ a (Wesolowski et al. 2014) . , A na-anyị nwere ike iche abụọ dị iche iche ọnọdụ:
Ọ bụ ezie na na ma nke ọnọdụ ndị a na-akpọ data na-asọpụta nke ụlọ ọrụ, na informational norms banyere ndị a ọnọdụ abụọ bụ abụghị otu n'ihi iche n'etiti eme ihe nkiri, àgwà, na nnyefe n'ụkpụrụ ndị o metụtara. N'ilekwasị anya na naanị otu n'ime ndị a parameters pụrụ iduga gabiga ókè simplistic mkpebi. N'ezie, Nissenbaum (2015) a gosi na ọ dịghị onye n'ime mmadụ atọ a parameters nwere ike osụhọde ka ndị ọzọ, ma ọ nwere ike ọ bụla otu n'ime ha n'otu n'otu kọwaa informational norms. A atọ akụkụ ọdịdị nke informational norms-akọwa ihe mere n'oge gara aga mgbalị-na-elekwasị anya na ma àgwà ma ọ bụ nnyefe ụkpụrụ-abụrịrị adighi ike na akada ezi uche notions nke nzuzo.
Otu nsogbu ọ na-eji echiche nke onodu-ikwu informational norms iduzi mkpebi bụ na-eme nnyocha nwere ike ghara ịma ha tupu oge eruo ma ha bụ nnọọ ike tụọ (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) . Ọzọkwa, ọ bụrụgodị na ụfọdụ nnyocha ga-emerụ Contextual-ikwu informational norms na ọ pụtaghị na nnyocha na-ekwesịghị ime. N'ezie, n'Isi nke 8 nke Nissenbaum (2010) bụ kpamkpam banyere "Ịkwụsị Iwu maka Good." N'agbanyeghị ihe nsogbu, onodu-ikwu informational norms bụ ka a nnọọ uru n'ụzọ na-ele ihe banyere ajụjụ ndị metụtara nzuzo.
N'ikpeazụ, nzuzo bụ otu ebe m na hụrụ ọtụtụ nghọtahie dị n'etiti na-eme nnyocha na-enye mkpa ka Nkwanye Ùgwù maka Persons na ndị na-enye mkpa ka Beneficence. Were ihe banyere onye ahụ ike ọha na-eme nchọpụta na-na nzuzo ese ndị na-ewere mmiri n'ihi na-aghọta ọcha na ịdị ọcha bụ isi ihe na-egbochi mgbasa nke a akwụkwọ efe efe. Researchers na-elekwasị anya Beneficence ga-elekwasị anya na uru na-otu a na nnyocha na pụrụ ọbụna ịrụ ụka na ọ dịghị ihe mmerụ ka sonyere ma ọ bụrụ na-eme nchọpụta na-eme ya nnyocha na-enweghị nchọpụta. N'aka nke ọzọ, na-eme nnyocha na-enye mkpa ka Nkwanye Ùgwù maka Persons ga-elekwasị anya na eziokwu ahụ bụ na-eme nchọpụta na-adịghị imeso mmadụ n'ụzọ nkwanye ùgwù na bụ n'ezie na-eme ha ihe ọjọọ site na ịgabiga iwu nzuzo ha. O di nwute na, ọ dịghị mfe iji dozie emegiderịta echiche nke ọnọdụ a (ọ bụ ezie na ihe ngwọta kasị mma na nke a pụrụ nnọọ ịbụ na-arịọ maka nkwenye).
Ná mmechi, mgbe ji na-atụgharị ihe nzuzo, ọ dị ịkwaga n'ofè gabiga ókè simplistic ọha / onwe dichotomy na-ele ihe anya kama banyere onodu-ikwu informational norms, nke na-mere nke elu ato:-eme ihe nkiri (isiokwu, sender, nnata), àgwà (ụdị nke ozi), na nnyefe ụkpụrụ (constraints n'okpuru nke ọmụma aga) (Nissenbaum 2010) . Ndị nnyocha ụfọdụ inwale nzuzo na okwu nke mmerụ ahụ pụrụ isite ndị mebiri nke nzuzo, ebe ndị ọzọ na-eme nnyocha ele ndị mebiri nke nzuzo dị ka a nsogbu na nke ya onwe. N'ihi na notions nke nzuzo na ọtụtụ digital usoro na-agbanwe oge na-aga, ịdị iche iche site n'otu onye gaa, na ịdị iche iche site na ọnọdụ na ọnọdụ (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , nzuzo yiri ka ịbụ isi iyi nke siri ike mkpebi ndị metụtara ụkpụrụ maka na-eme nnyocha maka ụfọdụ oge.